Maxkamad lasoo Taagay Gabadh ku Hanjabtay Inay Dilayso Obama. – Heemaal News Network
Gabadh yar oo si joogto marka ay asxaabteeda qadka kula sheekeysanayso sheegi jirtay in ay doonayso in ay disho madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama ayaa maxkamad lasoo taagay.,
Gabadhan ayaa lagu magacaabaa Safaa Boular, waxayna jirtaa 18 sano, waxaana la sheegay in ay duufsadeen kooxda Daacish.
Maxkamadda ayaa laga hor sheegay in nin ay kala xiriiri jirtay Suuriya uu weeydiiyay su’aal ah sifada ay ku dili karto Obama, kadibna ay u dirtay sawir qarax.
Gabadha oo ku nool koonfurta London ayaa beenisay eedeymo loosoo jeediyay oo ahaa argagixisinimo.
Garyaqaankeeda u doodaya ayaa sheegay in gabadhan uu tashkiiliyay nin saaxiibkeed ah oo horey loo duufsaday.
Xeer illaaliye Duncan Atkinson ayaa sheegay in gabadhan ay 17 jir ahayn marka ay qoraaladan direysay iyada oo la sheekeysanaysay mintidiinta Daacish.
Gabadhan ayaa sidoo kale lagu eedeeyay in ay qorsheynaysay in ay qaado weeraro loo adeegsado garneelo gudaha Britain.
Trump Oo Go’aansaday Koofurta Kuuriya Iyo Shiinaha Oo Uu Saaxiib La Ahaa In Uu Cunaqabatayn Ku Soo Rogo
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu cunaqabteyn ku soo rogi doono Shiinaha isla mar ahaantaana uu joojin doono heshiiska ganacsi ee bilaashka ah ee Koonfurta Kuuriya. Trump hanjabaadiisa in uu tallaabo ka qaadi […]
Ninkii Dadka Badan ku Dilay Magalada Texas Oo la Ogaaday Inuu kasoo Baxsaday Cisbitaalka Waalida.
Ninkii hubeysnaa ee kaniisadda ku taalla Texas ku dilay 26 qof ayaa la sheegay in uu ka soo baxsaday cisbitaallka xannuunka dhimirka, sanadkii 2012-kii, sida lagu xusay warbixinta ay soo saareen booliska. Saraakiisha El Paso […]
Trump Oo ka Xanaaqay Hillary Clinton Oo Akhrisatay Buugga Laga Qorey.(Sawirro)
January 29, 2018 Caalamka
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donlad Trump ayaa la sheegay in uu ka xumaaday in Hillary Clinton uu kaga guuleestay doorashadii dhacday ay akhriso buuga Fire and Furry ee isaga laga qorey . Waxaa lasoo bandhigay Muuqaal […]